Ogologo: Meewanye Ọdịnaya Gị Ahịa ROI na ọdịnaya mmekọrịta | Martech Zone
Na Podcast na nso nso a na Marcus Sheridan, o kwuru maka ụzọ ndị azụmaahịa na-efu akara na mgbe ha na-emepe mbọ ahịa ahịa dijitalụ ha. Nwere ike ige ntị na ihe niile merenụ ebe a:
Otu igodo ọ gwara dị ka ndị ahịa na azụmaahịa na-aga n'ihu na-eduzi onwe ha na njem ndị ahịa ha bụ ọdịnaya mmekọrịta. Marcus kwuru ụdị ọdịnaya atọ nke mmekọrịta na-enyere onwe gị aka:
Ime onwe onwe gị - ikike maka atụmanya ịtọlite ​​ụbọchị na oge iji soro akara ahụ na-emekọ ihe site na ngosi, webinar, ma ọ bụ oku nchọta.
Ọnụ onwe ya - ikike nke olile anya iji ghọta nke ọma ụgwọ nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Agaghị emezu nke a n'ụzọ doro anya, mana ọbụlagodi ịnye oke dị oke mkpa maka njem ahụ.
Nyocha onwe - ikike maka atụmanya ịnyagharịa n'usoro ajụjụ ma ọ bụ iru eru nke na-enyere ha aka inweta ndụmọdụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ịzụ ihe gị.
Ogwu: Ihe Mmekorita nke Mmekorita
N'adịghị ka mgbasa ozi, ọdịnaya mmekọrịta na-agbakwunye uru site na iwulite ntụkwasị obi na inyere onye zụrụ ya aka ka ọ banye na nzọụkwụ ọzọ na njem ịzụrụ. Mkparịta ụka nke mmekọrịta na-apụtachaghị nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma na itinye ndị ọrụ gị ihe ruru 30% karịa peeji ọdịda ọdịda. Mmekọrịta mmekọrịta na-enyekwa gị ohere ịmatakwu nghọta banyere ndị ọrụ gị ka ha na-aza ajụjụ ma tinye data.
Ijikọta ọdịnaya mmekọrịta na-arụ ọrụ site na:
Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-edu ndú na-abawanye - Jiri Outgrow's 1000+ mara mma nke kachasị kachasị mma iji melite mgbanwe ntụgharị gị karịa 40%!
Ruru eru na-eduga na Add Uru - Nye azịza ahaziri iche nke ajụjụ ndị kachasị mkpa nke ndị ahịa gị, ma na-eme ka ndu gị.
Asuanetop N'ime Nkeji N'ebe ọ bụla - Embed Outgrow ọdịnaya na ibe gị, dị ka mmapụta, na nkata, ebumnuche ọpụpụ, ma ọ bụ na subdomain gị.
Nchịkọta ọgụgụ isi na ntinye data - Nweta nghọta ndị ahịa mgbe ị na-enyere ha aka, kewaa ndị na-ege gị ntị ma jikọta data gị na ngwaọrụ 1000.
Mmekọrịta Mmekọrịta Afọ Ojuju nke Outgrow
All nke RịgoA nwalere nhazi nke ahịrị ma kachasị maka ntụgharị, ntinye aka, nha ihuenyo, ihe nchọgharị na ịkekọrịta. Ndị na-ewu ụlọ ha nwere ọgụgụ isi na-enye otu nhọrọ, ọtụtụ nhọrọ, ọnụ ọgụgụ sliders, akpịrịkpa echiche, ọkwa, ụbọchị / onye na-atụtụ oge, bulite faịlụ, na ndị ọzọ. Mmekọrịta mmekọrịta ị nwere ike iwulite gụnyere:
Ihe mgbako onu ogugu
Ule / Ule Nyocha
Nnyocha ndị e mere
Enwere ike ịdepụta ọdịnaya ahụ iji gosi akara ngosi gị, nye ngalaba na-akparaghị ókè maka ajụjụ ọ bụla, nye ozi izizi dabere na nsonaazụ, ma nwee ike gosipụta ya site na nyocha foneelu iji nye gị nghọta na arụmọrụ mmekọrịta gị. Nsonaazụ oge nwere ike ịgụnye eserese akara ike, eserese achịcha, tebụl, eserese mmanya, chaatị radar, ma ọ bụ eserese polar.
Outgrow na-arụ ọrụ nke ọma karịa anyị karịa blọọgụ na eBooks maka ịhazi onwe ya. Ọ bụghị naanị ịgụ ma ọ bụ ikiri ọdịnaya ọzọ, atụmanya ọ bụla na-enweta ozi nkeonwe na nke dị mkpa ozugbo ma ọ bụ site na mgbako, ajụjụ nyocha, nkwanye, ma ọ bụ nkata.
Leonard Kim, Onye Mgbakwunye Azụmaahịa, Forbes
Rịgo gụnyere ihe ntinye 1,000 na data, ahịa, na ngwa ahịa gụnyere Google Sheets, Aweber, Mailchimp, Marketo, Hubspot, GetResponse, Emma, ​​MailerLite, Salesforce Pardot, Salesforce CRM, Active Campaign, Drip, na ndị ọzọ!
Wụpụta ọdịnaya mmekọrịta mbụ gị na outgrow n'efu
Ngosipụta: Ana m eji nke m Rịgo Mgbakwunye njikọ na edemede a.
Tags: eserese mgbochimgbanakanyochamgbakoonye na-agbako ihe mgbakonkatankatakeonodu oziụdị onye na-ewu ụlọformsfoneelu nyochadịkwuo akakabarede udumụbaa mgbanwemụbaa njikọ akamụbaa ahịaọdịnaya mmekọrịtaahịrịonye nyocha ntule n'ịntanetịonye na-ewu ihe na ntanetị n'ịntanetịonline chatbot na-ewu ụlọonline quiz na-ewu ụlọonye na-eme nnyocha ntanetị n'ịntanetịonline nnyocha ngwá ọrụito etochaatịpolar esereseazịza ajụjụna-agbagharachaatịnyocha ụlọtebụl
Syncari: Gbanwee ma jikwaa data Cross-Functional Data, Automate Workflows ma kesaa nghọta tụkwasịrị obi ebe niile.
Jun 17, 2021 na 2:28 AM
Akwa post dị ka ọ dị na mbụ Douglas,
Ọdịnaya nwere ike ịga ngwa ngwa n'ịntanetị ngwa ngwa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnọ na ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ọsọ. Ọbụna ọdịnaya a na-akpọ "evergreen", nke kwesịrị ịdị mkpa maka ọtụtụ afọ, na tiori, nwere ike ọ gaghị amasị ndị na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ Google na afọ ole na ole.